प्रदेश १ Archives - Page6of 8 - Dna Nepal
प्रमुख समाचार : बंगलादेशका राष्ट्रपति हमिद काठमाडौंमा
प्रमुख समाचार : कम्युनिष्टले मुलुकलाई उल्टो बाटोमा लग्यो : नेता रिजाल
एक साताभित्रै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी ८ पुष २०७४, शनिबार ०२:५२
काठमाण्डौं, पुस ८ । सरकारले एक साताभित्र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभातर्फ समानुपातिक प्रणालीको मतपरिणाम सार्वजनिक गरिसकेकाले सरकारलाई प्रदेश प्रमुख तोक्न दबाब परेको हो । आयोगले शुक्रबार प्रदेश सभामा..
कुन प्रदेशमा कसको सरकार ? (पढ्नुस बिस्तृतमा) ३ पुष २०७४, सोमबार ०३:४३
प्रकाश ढकाल पोखरा, पुस ३ । नयाँ संविधानले ब्यवस्था गरेको संघीय संरचना अनुसार नै देशमा तीन तहको चुनाव सम्पन्न भैसकेको छ । ३ वटा पटके स्थानीय तहको चुनाव सकेपछि मंसिर १० र २१ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव भयो । सम्पन्न चुनावको मतपरिणाम..
गच्छदारले जोगाए काँग्रेसको साख, भगवती ३२१ मतले हारिन्
पोखरा, मंसिर २७ । निकै रोचक बनेको सुनसरी ३ को मतगणना सकिएको छ । लामो समयसम्म पछि परेका नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार विजय गच्छदार त्यसलाई उल्टाउँदै बिजयी भए । गच्छदारले एमाले उम्मेदवार भगवती चौधरीलाई ३ सय २१ मतले पराजीत गरे । गच्छदारले ३८ हजार ९..
सुनसरी ३ (ख) मा कांग्रेसका चौधरी विजयी
सुनसरी, मंसिर २७ । सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ प्रदेशसभा ’ख’ मा नेपाली कांग्रेसका अगमलाल चौधरी विजयी भएका छन् । बुधबार बिहान सार्वजनिक भएको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार नेकपा एमालेका रामदेव यादवलाई ३ हजार ८ सय ६१ मतले पराजित गर्दै चौधरी विजयी भएका हुन्..
वाम गठबन्धनको ६ वटा प्रदेशबाट दुई तिहाई २६ मंसिर २०७४, मंगलवार १७:०६
काठमाडौँ, मंसिर २६ । भर्खरै सम्पन्न मतपरिणाम अनुसार प्रत्यक्षतर्फ ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धन दुई तिहाई बहुमत सहित विजयी भएको छ । प्रदेश नं १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा गठबन्धनले दुईतिहाइ भन्दा बढी ठाउँमा जीतेको हो । २ नम्बर प्रदेशमा भने कमजोर देखिएको छ ।..
को बन्दैछन् प्रदेश प्रमुख ? यि हुन् चर्चित अनुहार
काँग्रेसलाई सोलुखुम्बुमा समानुपातिक भोट सबैभन्दा धेरै
सोलुखुम्बु, मंसिर २६ । सोलुखुम्बुमा पत्यक्षतर्फ वाम गठबन्धनसँग पराजित हुन पुगेको कांग्रेस समानुपातिकतर्फ पहिलो पार्टी बनेको छ । समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुबैमा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो, माओवादी केन्द्र..
मध्यरातमा नेता सिटौलाको घरमा बम विस्फोट १२ मंसिर २०७४, मंगलवार ०२:४५
काठमाण्डौं, मंसिर १२ । झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढीस्थित नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको घरलाई लक्षित गरी सुतली बम विस्फोट भएको छ । उनी झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार हुन् । गएराति करिब १२ः४५ बजे घर नजिकै..
पोखरा, कार्तिक २६ । नेपाली कांग्रेका केन्द्रीय सदस्य एवं पोखरा–३३ का संयोजक जीवन परियारले युवाशक्ति राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण खम्वा भएको बताएका छन् । उनले युवाहरू सही मार्ग पहिल्याउँदै देशको.....
पोखरा, कार्तिक २६ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिलेन्द्र रिजालले कम्युनिष्ट शासनले मुलुकलाई उल्टो बाटोमा.....